Life inaYear | MM Movie Store
ခင်ဗျားတို့ဘဝမှာဖြစ်ရမယ်လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေ အိပ်မက်တွေရှိကြတယ်မလားအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်တွေအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ရေးဆွဲထားတဲ့ Plan တွေလည်းရှိမှာပဲဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ Plan တွေက တကယ်ရောအလုပ်ဖြစ်ရဲ့လား??? အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်တွေ အိပ်မက်တွေကရော ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင် သတ်မှတ်ထားတာဟုတ်ရဲ့လား???
ကျွန်တော်တို့တွေတော်တော်များများက ဆယ်ကျော်သက်ဘဝမှာ မိဘတွေပုံသွင်းထားတဲ့ဘောင်ထဲကရည်မှန်းချက်ကို ကိုယ့်ရဲ့တကယ့်အိပ်မက်လို့ယူဆထားကြမိတယ်သူတို့ရဲ့ဘောင်လေးထဲမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပုံစံကျအောင်နေရင်း ကြိုးစားခဲ့ကြတာဒါတွေက ကိုယ့်ရဲ့တကယ့်အိပ်မက်မဟုတ်တဲ့အခါကြာလာတော့ ကြိုးစားရတာ ပင်ပန်းလာတယ်ဒီလိုနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အိပ်မက်တွေဟာ ဘာမှန်းတောင် မသိကြတော့ပါဘူး
ဒီဇာတ်ကားထဲက Jaden Smith သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့Daryn ဆိုတဲ့ ကောင်လေးက ဒီလိုကောင်လေးမျိုးပေါ့တစ်ရက်မှာတော့ ရှိုးပွဲတစ်ခုသွားရင်းက အမှတ်မထင်ဆုံခဲ့ရတဲ့ကောင်မလေးကိုစိတ်ဝင်စားသွားမိတယ်Daryn ရဲ့ပုံစံအမှန် ဖော်ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ကောင်မလေးကိုချစ်မိသွားချိန်မှာ ကောင်မလေးနဲ့ပက်သက်ပြီး သူသိလာရတဲ့အရာတွေက……Plan တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ သူ့ရဲ့ကမ္ဘာမှာ သူတကယ်ဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့အရာကရော ဘာများလဲ??ဇာတ်အိမ်အရတော့ ဆယ်ကျော်သက်အချစ်ဆိုပေမယ့်တော်တော်လေးကို Touching ဖြစ်တဲ့ကားဗျTrue Love meaning ကိုလည်း ဒီထဲတွေ့နိုင်တယ်Jarden Smith နဲ့ Cara Delevingne သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကလည်း တော်တော်လေးကိုပြည့်စုံပါတယ်Jarden Smith ရဲ့သီချင်းကို emotional အပြည့်နဲ့နားထောင်နိုင်နေရုံနဲ့တော်တော်လေးကိုတန်နေပြီလို့ပြောရမှာပါ